Global Voices teny Malagasy » Mitambatra Ireo Mpikatroka Nomerika Ao Myanmar Mba Hiaro Ny Zo Nomerika-n’ny Vahoaka Ao Amin’ny #DigitalRightsMM · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 09 Febroary 2018 8:01 GMT 1	 · Mpanoratra Juan Cebu Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Azia Atsinanana, Myanmar (Birmania), Fahalalahàna miteny, Fanampenam-bava, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Zon'olombelona, GV Mpisolovava
Sary nalaina tao amin'ny Twiter-n'i Phandeeyar. Nahazoana alalana.
Hatramin'ny taona 2011, niainga 2.5 isan-jato hatramin'ny 90 isan-jato mahery ny taham-pidirana amin'ny finday ao Myanmar, nitondra olom-pirenena an-tapitrisany tanaty aterineto satria niala ny didy jadona miaramila nankany amin'ny demaokrasia ara-dalàm-panorenana ny firenena .
Niatrika fanamby lehibe ny fipoahan'ny fifandraisana antserasera tampoka izay nateraky ny fanalalahana ny tsena : ny filàna hanatsara ny kolontsaina nomerika, ny fanjakazakan'ny kabarim-pankahalàna an-tserasera, ny fijirihana mahery vaika sy ny fanafihana antserasera hafa. Ireo olana rehetra ireo dia nametraka ny filàna fiarovana ny tsiambaratelon'ny mpiserasera, ady amin'ny fanilikilihana nomerika sy mamaha ny tsy fisian'ny rafitra ara-dalàna mahomby hiarovana ny zon'ny mpisera aterineto.
Ny 18 sy 19 Janoary, nampiantrano Forum Faharoa momba ny zo Nomerika ao amin'ny firenena i Yangon City any Myanmar, ka nasaina ny olom-pirenena mba handinika sy hiadihevitra momba ireo lohahevitra ireo amin'ny fomba malalaka.
Faharoa izao i Myanmar no nampiantrano fifanakalozan-kevitra lehibe indrindra momba ny zo nomerika, nitondra ireo manam-pahaizana eo amin'ny sehatra maro samihafa tahaka ireo mpitantana orinasa, vondrona fiarahamonim-pirenena, sampam-panjakana, mpitantana indostrian'ny teknolojia ary mpikatroka zon'olombelona. Toerana ara-teknolojika ao Yangon, Phandeeyar , no nitarika ny fikarakarana ny fifanakalozan-kevita izay natrehin'ny  olona maherin'ny 150.
Vehivavy mpitarika avy amin'ny fikambanana samihafa miasa amin'ny teknolojia sy ny fanavaozana politika ireo mpikarakara
Mpikarakara ny MDRF 2018….
Niresaka momba ireo olana isan-karazany atrehin'i Myanmar taorian'ny “revolisionan'ny fifandraisana” izay nahitàna ny fitomboan'isan'ireo mpampiasa finday mba handrakotra ny firenena manontolo ao anatin'ny 5 taona ny Digital Rights Forum.
Fanamafisana ny fiarovana nomerika sy ny fiainana manokana.
Ireo olana lehibe amin'ny fiarovana ny fiainana manokana ao Myanmar: ny tsy fisian'ny rafitra ara-dalàna amin'ny fiainana manokana, ny fijirihana, ny famantarana nomerika, ny tsy fahampian'ny fanentanana ny mpiserasera, ny tsy fahaizana momba ny fiarovana tahiry sy ny fiainana manokan'ny sehatra tsy miankina
Tahaka ny firenena maro hafa, tsy manana rafitra ara-dalàna hiarovana ny tsiambaratelon'ny mpampiasa aterineto manoloana ny fanarahamaso tsy ara-dalàna sy ny famarotana ny tahirin'ny mpiserasera i Myanmar.
79% of MDRF participants think that #onlineprivacy  and #DigitalSecurity  has got worse in 2017 in #Myanmar #digitalrightsmm pic.twitter.com/SqZnB3F3oJ 
79% tamin'ireo mpandray anjara tamin'ny MDRF no mihevitra fa niharatsy tamin'ny taona 2017 ny #onlineprivacy  (fiainana manokana antserasera) sy ny #DigitalSecurity  (fiarovana nomerika) #Myanmar 
CCTVs are starting to install in Yangon city now but there are no systematic rules and might be misuse of personal data privacy. Yangon Regional MP @NayPhoneLatt  on Guaranteeing user privacy panel at #digitalrightsMM 
Manomboka mipetraka ao an-tanànan'i Yangon ny fakantsary fanaraha-maso ankehitriny saingy tsy misy fitsipika ara-dalàna ka mety hisy ny fampiasana tsy araka ny tokony ho izy ny tahiry momba ny fiainana manokana. Solombavambahoakam-paritra ao Yangon @NayPhoneLatt miresaka momba ny Fiantohana ny fiainana manokan'ny mpiserasera ao amin'ny #digitalrightsMM 
Ho an'ireo mpisera media sosialy maro ao Myanmar, ilaina ny fahatakarana ny fiarovana nomerika – saingy tsy manana fahaizana lehibe momba izany sehatra izany ny ankamaroan'ny olona. Tena olana goavana ho an'ireo mpikatroka zon'olombelona, ireo olo-malaza sy mpanao gazety izany, izay iharan'ny fijirihana sy fanafihana “fandrika (phishing)” ny kaontin'izy ireo antserasera ary mety hamoaka ny mombamomba azy ireo manokana sy hampidi-doza azy ireo.
If you are concerned about your digital security, come and be consulted by us at our digital security clinic at #MDRF2018  about your digital health.#MIDO #DigitalSecurity #ICT4D #DigitalRightsMM pic.twitter.com/mdd3c7I9x1 
Raha miahiahy momba ny fiarovana nomerika ianao, tongava mametraka fanontaniana aminay ao amin'ny klioba fiarovana nomerika ao amin'ny #MDRF2018 momba ny toetra ara-nomerika anao.
Misy ihany koa ny tsy fahampian'ny fanentanana mikasika ny maha-zava-dehibe ny fiarovana antserasera eo amin'ireo orinasa tsy miankina, ny mpanjifan'izy ireo, sy ny mpanjifa ao Myanmar.
not sure if financial sector attended #mdrf2018 . Lots of informal data sharing of client/company info seems to be happening on different unsecured messenger platforms. such a nightmare #DigitalrightsMM 
Tsy azoko antoka raha nanatrika #mdrf2018  ny sehatra ara-bola. Toa betsaka ny fifampizarana angon-drakitry ny mpanjifa/orinasa izay mitranga any amin'ireo sehatra fandefasan-kafatra isan-karazany tsy voaaro. tahaka ny nofy ratsy
Miady amin'ny kabarim-pankahalana
Nahitana fitomboan'ny kabarim-pankahalàna ao amin'ny sehatra sosialy an-tserasera ihany koa i Myanmar. Tsikaritra voalohany tamin'ny taona 2012 ny tranga mampiahiahy  raha lasa seha-bahoaka malaza ho an'ny fifanakalozan-kevitra ara-politika sy ny fikatrohana ny Facebook. Tena betsaka loatra ny kabarim-pankahalana teo amin'ireo vondrona nasionalista  izay manafika ireo vitsy an'isa ara-pivavahana, indrindra fa ny vondrona Miozolomana Rohingya.
Nahitàna adihevitra momba ny fomba hiarovana ny fahalalaham-pitenenana ao anatin'ny tranga ratsy momba ny kabarim-pankahalàna amin'ny aterineto ihany koa ny hetsika. Naneho ny ahiahiny mikasika ny loza ateraky ny kabarim-pankahalàna ilay tanora mpikatroka Thinzar Shunlei Yi , tamin'ny fanatsongana ny iray tamin'ireo mpandahateny tao amin'ny fifanakalozan-kevitra:
Tonga miaraka amin'ny andraikitra ny fahalalahana. Tsy Kabarim-pankahalana ny Fahalalahana miteny. Ao Myanmar, nahavita nanaparitaka tamim-pahombiazana momba ny fahalalaham-pitenenana ho toy ny fandrahonana ireo mpanao didy jadona. Mitandrema momba izany.
Manatsara ny fidirana antserasera
Niresaka momba ny maha-zava-dehibe ny fandraisana anjaran'ireo mpanao lalàna, mpanapa-kevitra, mpitsara sy ireo mpitarika manan-danja hafa amin'ny rafitra ara-dalàna ihany koa ireo mpandray anjara mba hahafantaran'izy ireo bebe kokoa momba ny zo nomerika.
Nay Phone Latt , mpikambana ao amin'ny Parlemanta izay nanatrika ny seha-pifanakalozan-dresaka, nilaza fa tokony hiara-miasa ny governemanta sy ireo mpiray antoka hafa ao amin'ny sehatra tsy miankina.
Tsy dia misy loatra ny fakana ny hevitry ny vahoaka mikasika ny famolavolana lalàna na fitsipika vaovao. Ny tsy fisian'ny fakan-kevitra no mahatonga ny asa ho sarotra kokoa. Ny Lalàna momba ny Fiainana manokana sy ny Fiarovana ny Olom-pirenena, ohatra, dia tsy nomanina tsara ary, amin'ny lafiny sasany, manitsakitsaka zo nomerikan'ny olom-pirenena.
Mpikatroka tanora Thinzar Shunlei Yi nanamafy fa ny fanabeazana nomerika, fa tsy ny fitsipika, no ilain'ny firenena ankehitriny:
Ny Tontolo Nomerika Myanmar dia mila Fanabeazana bebe kokoa, fa tsy Fitsipika.
Mbola fanamby lehibe ny fiantohana ny fidirana mitovy amin'ny aterineto. Ohatra, mila karatra famantarana ofisialy ny fividianana karatra SIM finday. Maro ireo foko any Myanmar tsy manana ity antontan-taratasy ity, tahaka ireo olona Rohingya an'arivony izay nolavina ny maha olom-pirenena azy ireo (na dia teraka tany Myanmar aza).
Nanazava ny toe-draharaha i Yaya, mpiaro ny politikan'ny “transgender”.
Tsy manana fiarovana ny lalàna momba ny fiainana manokana ary ny fahazoana karatra SIM dia miankina amin'ny fananana kara-panondro avy amin'ny fanjakana, izay tsy voatery manana izany ny olon-drehetra
“Tsipaho ny 66 (d)”
Nanangana tranonkala  mampiroborobo fanentanana ho amin'ny fanafoanana ny lalàna manafay antsoina hoe 66 (d), lalàna momba ny kabary an-tserasera izay mamela ny manampahefana hisambotra ireo mpisera media sosialy izay “manala-baraka” na “manelingelina” ny hafa amin'ny aterineto, miaraka amin'ny fepetra manokana ho an'ny manampahefam-panjakana ny Fifanakalozan-kevitra momba ny Zo Nomerika. Efa 106 ireo tranga fisamborana olona hatramin'ny nampidirana ny lalàna tamin'ny taona 2013.
Launch of #SayNOto66d  website at Myanmar Digital Rights Forum. Monitors section #66d  cases and provides data driven insights. Visit on https://t.co/Poovy25AdO #digitalrightsMM pic.twitter.com/hudwdpWQC4 
Fananganana ny tranonkala #SayNOto66d  (Tsipaho ny 66d) ao amin'ny Fifanakalozan-kevitra momba ny Zo Nomerika ao Myanmar. Araho ireo tranga # 66d ary manomeza vaovao mifototra amin'ny tahiry. Tsidiho ny https://t.co/Poovy25AdO#digitalrights
Afaka miova mankany amin'ny tarehin-tsoratra iraisana ve i Myanmar?
Fiovana hafa ho an'ny fampandrosoana ny aterineto ao Myanmar ny tsy fananan'i Myanmar endri-tsoratra iraisana ao amin'ny aterineto izay mifanaraka amin'ny rafitra fanoratana iraisam-pirenena antsoina hoe Unicode. Amin'izao fotoana izao, mampiasa endri-tsoratra tsy manan-daza antsoina hoe Zawgyi  ny firenena, izay novolavolaina tamin'ny firenena mbola tao anatin'ny sazy iraisam-pirenena. Na izany aza, nanjary raiki-tapisaka loatra ny fampiasana azy ka sarotra ankehitriny ny mifindra rafitra Unicode. Ny voka-dratsy lehibe amin'ny fampiasana Zawgyi dia ny tsy fahafahany mampiditra ireo endri-tsoratra avy amin'ny tenim-poko ao amin'ny firenena, izay manohintohina ny tanjona amin'ny fanatsarana ny fidirana an-tserasera.
Nyein Chan Ko Ko, mpikirakira teknolojia sady mpikatroka Unicode, nanazava ny antony maha zava-dehibe ny fampiasana endri-tsoratra iraisana.
Miresaka momba ny tsy fananana rafitra Unicode ho an'ny fiteny Birmana izay mahatonga azy io tsy azo ampiasaina i Nyein Chan Ko Ko, satria tsy azo vakiana amin'ny efijerin'ny mpamaky izy io. Vao mainka koa sarotra ny mampiasa ny fitenim-poko. #digitalrightsMM
before we implement E- government. #myanmar #digitalrightsmm 
Tokony ho laharam-pahamehana ny fampanarahana endri-tsoratra alohan'ny hametrahana ny E-goverrnemanta.
Azonao jerena avokoa ny momba ireo resadresaka momba ny zo nomerika ao Myanmar amin'ny fampiasana ny tenirohy #digitalrightsMM.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/02/09/114523/
 2.5 isan-jato : https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2012/burma
 90 isan-jato : https://www.mmtimes.com/business/technology/21466-ministry-puts-mobile-penetration-at-90-percent.html
 manam-pahaizana : http://www.myanmar-responsiblebusiness.org/news/digital-rights-forum-2018.html
 January 18, 2018: https://twitter.com/JRezarBoi/status/953832823080669186?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 18, 2018: https://twitter.com/nicadoom/status/953834924326268928?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 18, 2018: https://twitter.com/Phandeeyar/status/953865074040455168?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 18, 2018: https://twitter.com/gargar_hn3/status/953874683853762560?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 19, 2018: https://twitter.com/myanmarido/status/954230535781457920?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 20, 2018: https://twitter.com/yaya_amazing/status/954540260477747200?ref_src=twsrc%5Etfw
 tranga mampiahiahy: https://globalvoices.org/2015/02/22/can-panzagar-flower-speech-facebook-stickers-end-hate-speech-in-myanmar/
 Thinzar Shunlei Yi: https://www.facebook.com/Thinzarshunleiyi/posts/1938162559544656
 January 18, 2018: https://twitter.com/thinzashunleiyi/status/953834090343444480?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 18, 2018: https://twitter.com/yaya_amazing/status/953945961696436224?ref_src=twsrc%5Etfw
 fisamborana olona : https://globalvoices.org/2018/01/29/since-2016-myanmar-courts-have-convicted-100-of-people-charged-under-telecom-law-66-d/
 January 18, 2018: https://twitter.com/Phandeeyar/status/953925169390563328?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 18, 2018: https://twitter.com/povmumbai/status/953893942872784896?ref_src=twsrc%5Etfw
 January 19, 2018: https://twitter.com/nyeinchamkoko/status/954246199200038913?ref_src=twsrc%5Etfw